Xisbigga Moderat-ka oo doonayo in la adkeeyo qaadashada dhalashadda Iswiidhan | Somaliska
Xisbigga Moderat-ka oo doonayo in la adkeeyo qaadashada dhalashadda Iswiidhan
Xisbiga Moderaterna ee dalkaan Iswiidhan, ayaa doonaya in la adkeeyo sharuudaha lugu qaadanayo dhalashadda Iswiidhan. Siyaasiibta kale ahTomas Tobé iyo Gunnar Strömmer, oo maqaal ay arrintan kaga hadlayaan ku daabacay wargeyska maalin laha ah ee Dagens Nyheter, ayaa sheegay in ay doonayaan ka xisbi ahaan ama sida fikirkooda ay ku qeexeen in la sameeyo waxa loo yaqaano abaal marin is dhexgal.
Waxeey sheegeen in xeerka dalka la bar bar dhigo xeerarka ka jira wadamadda Yurub qaarkood sida dalka Jarmalka iyo kuwa ku yaala waqooyiga Yurub. Waa in shuruudo lagu xiro qaadashada muwaadin-nimada dalka, kuwaasina oo ey ka mid yihiin aqoonta aasaaska luuqadda iswiidhishka iyo sidoo kale aqoon loo leeyahay mujtamaca.
Aqoontaa waxaa lagu muujin karaa imtixaanno la iska qaado aya shahaadooyin la ictiraaf-san yahay ee laga hantiyaey maadooyin jaamicadaha lagu dhigtay. Dood abuureyaasha ayaa sidoo kale soo jeediyey in dib loo eego fikir la soo ban-dhigey sannadkii 1974 ee la xiriiray baarista in shakhsigu kifaalo qaadi karo noloshiisa. Waa arrin la xiriira in nolol maalmeedka shakhsiga aanay inta badan ku xirnayn taageerada dhaqaale.
Sidoo kale in laba sannadood oo dheeri ah lagu daro muddad loo baahan yahay inay ka soo wareegtay si xaq loogu yeesho qaadashada muwaadin-nimmada Sweden. Toddoba sannadood oo dalka lagu dhaqan yahay iyo lix sannadood dadyoowga qaxootiga ee aan waddan (dhalasho) lahayn – statslösa.
Waxaa sidoo kale la soo ban-dhigey in abaal marin is-dhex gal “integrationsbonus” lagu soo rogo dadyoowga aqoonta u leh luuqadda iswiidhishka, isla markaana kaafiya noloshooda iney muwaadin-nimada qaadan karaan saddex sannadood ka hor. Tobé iyo Strömmer ayaa sidoo kale aamin-san in baaris loo saaro suurtagalka ah in muwaadin-nimada dib loogala laaban karo ”xaaladaha culus qaarkood”, sida tusaale ahaan dunuubta falalka argagixisada. Xisbiga M wuxuu sidoo kale soo jeediyay ciqaab ka culus ee lagu rido cidda fal xumada u adeegsata safarrada dal ku galka (baasaboorka) waddanka.
Xisbiga Sverigedemokraterna ayaa horay u taabac-sanaa fikirka ah in muwaadin-nimada dib loola laaban karo. Xisbiga Liberalerna ayaa horay u sheegay in qaadashada muwaadin-nimada Sweden lagu xiro luuqadda iswiidhishka iyo habka nolosha bulshada. Halka uu xisbiga Kristendemokraterna uu qabo baaris cirbad mud ah lagu sameeyo tallaabadaa.
Xisbiyada ku bahoobay xukuumadda ayaa aamin-san in xeerka ka deg-san muwaadin-nimmadu yahay mid miisaaman. Halka uu hoggaamiyaha xisbiga Vänsterpartiet Jonas Sjöstedt sheegay inuu dhab ahaan uga soo hor-jeedo fikirka uu soo ban-dhigay xisbiga Moderaterna ee kala noqoshada muwaadin-nimada Sweden:
“Waxaannu leenahey xeerar oraneya in haddii uu shakhsigu galo dembiyo culus laga masaafurin karo dalka. Waxaannu u aragnaa mid wanaag-san. Hase yeeshee kolka la qaato muwaadin-nimada dalka waa la siman yahay. Haddii kale waa in iyagana lagala noqdaa dal ku galka kuwii waa hore qaatay. Waxaa dhaceeysa inay muwaadin-nimadu noqoto mid aan sineeyn ee A iyo B, sida uu sheegay Jonas Sjöstedt, hoggaamiyaha xisbiga Vänsterpartiet.
Xigasho: Raadiyo Iswiidhen laanta soomaaliga
Booliska Sweden oo toogasho ku dilay nin Soomaali ah
Mubarik: Waxaan mooshin ka diyaariyay in soomaalida baasaboorka lagu siiyo 5 sano
Dowlada oo isbedalo ku samaysay sharcigii cusbaa ee qaxootiga